Jesu Akavimbisa Mutadzi Kuti Aizorarama Kudenga Here? | Mibvunzo Nemhinduro
Mubvunzo uyu unomuka nokuti Jesu akavimbisa mutadzi akaurayirwa padivi pake kuti aizorarama upenyu muParadhiso. Jesu akati: “Chokwadi ndinokuudza nhasi, Uchava neni muParadhiso.” (Ruka 23:43) Ona kuti Jesu haana kutaura kuti Paradhiso yacho yaizova kupi. Saka Jesu aireva here kuti mutadzi uyu aizova naye kudenga?
Chokutanga, ngatimboonai kuti mutadzi wacho aikwanisa here kuva netariro yokunorarama kudenga. Vanhu vane tariro yokunorarama kudenga vanofanira kubhabhatidzwa mumvura uye nemudzimu mutsvene vova vadzidzi vaJesu vakaberekwa nomudzimu mutsvene. (Johani 3:3, 5) Chimwe chinodiwa ndechokuti vave netsika dzinodiwa naMwari uye unhu hwakadai sekutendeseka, kuzvipira uye tsitsi. (1 VaKorinde 6:9-11) Vanofanirawo kuramba vakavimbika kuna Mwari naKristu kusvika panoperera upenyu hwavo hwepanyika. (Ruka 22:28-30; 2 Timoti 2:12) Kana vakaita izvozvo zvinodiwa, vanenge varatidza kuti vakakodzera kumutswa uye kuzoita basa ravo kudenga rokushumira sevapristi nemadzimambo vachitonga vanhu pamwe chete naKristu kwemakore 1 000.—Zvakazarurwa 20:6.
Asi mutadzi uya aiva padivi paJesu haana kuita izvi, nokuti akanga ararama asingateereri mutemo ndokufa ari mutadzi. (Ruka 23:32, 39-41) Chokwadi, akaratidza kuremekedza paakati kuna Jesu: “Mundiyeukewo kana mapinda muumambo hwenyu.” (Ruka 23:42) Kunyange zvakadaro, akanga asiri mudzidzi waJesu akabhabhatidzwa ndokuberekwa nomudzimu, uye haana kumboratidza kuva munhu ane unhu hwakanaka uye akatendeka. Zvine musoro here kuti Jesu aizomuvimbisa kunotonga kudenga pamwe chete nevateveri vake vakatendeka, vakazvipira kusvika pakuguma kweupenyu hwavo?—VaRoma 2:6, 7.
Tingazvienzanisira seizvi: Kana mumwe munhu akakukumbira ruregerero nokuti akaba mari yako, ungasarudza kusamuendesa kudare. Asi ungabva wavimba naye zvokuti unomupa basa rokutungamirira bhizimisi rako here kana rokutarisira mhuri yako? Ungatopa mabasa akadaro kune vaya chete vaunonyatsovimba navo. Saka vaya vanopiwa tariro yokunorarama kudenga vanofanira kuratidza kuti vakavimbika zvokuti vachaita zvinonzi naMwari ndizvo zvakarurama pavanenge vava kutonga. (Zvakazarurwa 2:10) Mutadzi uya haana kuratidza kuvimbika kwakadaro kunyange zvazvo akapa chikumbiro chemwoyo wose paakanga ava pedyo nokufa.
Asi Jesu haana kuudza mutadzi wacho kuti aizova naye kudenga musi iwoyo chaiwo here? Izvozvo hazvingamboiti nokuti Jesu wacho haana kuenda kudenga musi iwoyo. Asi aiva “mumwoyo wenyika,” kureva muguva kwemazuva matatu. (Mateu 12:40; Mako 10:34) Kunyange paakanga amutswa, akaramba ari panyika kwemazuva 40 asati akwira kudenga. (Mabasa 1:3, 9) Saka, hazviiti kuti titi mutadzi wacho akaenda kudenga naJesu musi iwoyo.
Saka mutadzi wacho aizopinda muParadhiso ipi? Pashure pokumutswa, achava muParadhiso yepasi pano inenge ichitongwa naJesu. (Mabasa 24:15; Zvakazarurwa 21:3, 4) Kuti uzive zvakawanda nezveParadhiso iyoyo uye zvinodiwa naMwari, taura nemumwe weZvapupu zvaJehovha.